ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Virtual ငွေကြေး / Cryptographic ငွေကြေး / နိုင်ငံတကာဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအသစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Portal ဝဘ်ဆိုက် ｜ GVMG - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
ကမ္ဘာ့ virtual ငွေကြေး, cryptocurrency အသစ်ကနိုင်ငံတကာဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး
မီတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Portal ဆိုက်ကို Curation
Cryptocurrency စျေးနှုန်းအမြင့်ဆုံး / မြင့်တက်နှုန်းကို|အများဆုံးချ - ပေါက်ကွဲမှုနှုန်း|ငွေပေးငွေယူ|ထွက်ကြ|အချိန်မှန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
အားလုံး Altcoin အမှတ်တံဆိပ် / မြက်ဒင်္ဂါးပြား(Shin Coin)သတင်းအချက်အလက်|လဲလှယ်|အရောင်းရုံး|ငွေလဲကောင်တာ|ဘယ်လိုဝယ်မလဲ|ငွေပို့နည်း|ကြေးနှိုင်းယှဉ်
Crypto ငွေကြေးစျေးကွက်သတင်းအချက်အလက်|ICO|IEO|STO|မင်း|ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအဆင့် / ဂုဏ်သတင်း၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊
Cryptographic ပိုင်ဆိုင်မှုပိုက်ဆံအိတ်|လုံခြုံရေး|App|အရောင်းအ ၀ ယ်အတွက်အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များကိုရှင်းပြခြင်း။
Curation media site "ကမ္ဘာ့ cryptocurrency / virtual ငွေကြေးပေါ်တယ် site"
Blockchain ပြည့်စုံသောသတင်းအချက်အလက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော“ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအရငွေကြေး / စာဝတ္ထုငွေကြေး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးအသစ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဝက်ဘ်ဆိုက်” ကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတိုင်းနှစ်သက်ကြသည်။(SNS)နောက်ဆက်တွဲဆိုဒ် link၊ buzz အားလုံးအခမဲ့မျှဝေပါ။ ဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆိုဒ်(နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း)ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိကုန်သည်များနှင့်သြဇာသက်ရောက်သူများ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်ခံယူထားပါသည်။
ယူအက်စ်တွင်အကြီးမားဆုံးသော US Sky Bridge ဖြစ်သည်(SkyBridge) 」仮想通貨 ビットコインファンドを立ち上げSECに申請 米国 ウォール街の投資会社創業者 元ホワイトハウス広報部長 アンソニー・スカラムーチ氏の数十億ドル規模のヘッジファンド、Skybridge မြို့တော်、အသစ်တစ်ခုကို Bitcoin (BTC) ရန်ပုံငွေစတင်ရန်、米国の証券規制当局に正式な申請書を提出した 免除申請のためのフォームDは、အဆိုပါအဆိုပြုချက်ကိုတနင်္လာနေ့တွင် Securities and Exchange Commission ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တင်ခဲ့သည်、発行体として「SkyBridge Bitcoin Fund L.P.」　関係者として「SkyBridge Bitcoin Fund GP LLC」が記載されている 文書によると、အဆိုပြုထားရန်ပုံငွေဖြစ်ပါတယ် “စောင်ရန်းကိုရန်ပုံငွေ “Skybridge သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ၏ပမာဏကိုကြေငြာရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်、個人投資家からの最低投資額は5万ドルとなる 募集はSECのReg. ကင်းလွတ်ခွင့်、တနည်းအားဖြင့် Skybridge Capital မှအဆိုပြုထားသည့် Bitcoin ရန်ပုံငွေသည်ဖြစ်သည်、認定された投資家のみが利用できることを意味しています この申請は、スカイブリッジ […]
Bitcoin သည်ရွှေဖြစ်သည်(ရွှေ)JP Morgan Chase ၏ငွေကြေးဖြင့်ပိုက်ဆံတက်နိုင်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်(JPMorgan Chase & ကုမ္ပဏီ)လေ့လာသုံးသပ်သူများကပြောကြားသည်、အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်စျေးနှုန်းကျဆင်းမှုကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်ဆက်လက်ဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်、အဆိုပါအလားအလာ rosy နှင့်အီရန် Bitcoin ရွှေဖြစ်ပါတယ်(ရွှေ)၎င်းသည် Bitcoin (BTC) ၏စျေးနှုန်းကိုတွန်းအားပေးနေသောအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဖြစ်နိုင်သည်။、နှင့် JP Morgan Chase(JPMorgan Chase & ကုမ္ပဏီ)Bloomberg မှဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၊、JP Morgan Chase(JPMorgan Chase & ကုမ္ပဏီ)နည်းဗျူဟာရေးဆွဲသူတစ် ဦး ဖြစ်သည့် Nikolaos Panigilt Zogru က Bitcoin ၏အနာဂတ်တွင်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အခန်းကဏ္ about နှင့် ပတ်သက်၍ ခန့်မှန်းချက်များကိုထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ JP Morgan Bitcoin သည် “အလွန်အကျွံဝယ်”JP Morgan Chase(JPMorgan Chase & ကုမ္ပဏီ)အဆိုအရ、ယခုလအတွက်ရန်ပုံငွေများများပြားလာခြင်း、စျေးနှုန်းညှိခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ဆက်လက်ရမည်ဖြစ်သည် […]
ငါရွှေထက် Bitcoin ဝယ်သင့်သလဲ? ယခု Wall Street တွင်အပူဆုံးဆွေးနွေးမှုဖြစ်သည်! ကို virtual ငွေကြေး Bitcoin စံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးနှိပ်အတူ、အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ရွှေအမြောက်အမြားကိုရွှေမှထုတ်ယူနေခြင်းဤသည်မှာတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုလော။、သို့မဟုတ်ပါက virtual ငွေကြေးနှင့်အဖိုးတန်သတ္တုစျေးကွက်များအပေါ်အလေးအနက်သက်ရောက်မှုရှိသောအလှည့်အစတစ်ခုလား။、သေချာမသိဘူး、Bitcoin သည်နောင်အနာဂတ်တွင်ရွှေနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်မလား、အဆိုပါအငြင်းအခုန်ကွဲပြားပေမယ့်ဖြစ်ပါတယ်、ယခုဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုသည် Bitcoin သည်တစ်နေ့လျှင်ငွေဖောင်းပွမှုနှင့်ငွေဖောင်းပွမှုအမျိုးမျိုးအတွက်ရွှေနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်သည်။、ဒီနှစ် 150% မြင့်တက်လာသည့် Bitcoin, ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျဆင်းခဲ့သည်、3လကတည်းကအများဆုံးကျဆင်းမှုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်、Virtual ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ Jean-Marc Bonufu သည် Bitcoin ၏မတည်ငြိမ်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ၎င်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုတွန့်ဆုတ်စေသည်။、အခုတော့ Bitcoin လိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အစားထိုးနေပြီ။ "、အကယ်၍ အထွေထွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကသိမ်းဆည်းထားသောငွေ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပင်နည်းနည်းအကြွေစေ့လုပ်ငန်းသို့စတင်ရွေ့သွားလျှင်、Wall Street ၏အမျိုးမျိုးသောမဟာဗျူဟာကိုပြောင်းလဲစေမည့်ကုန်သွယ်ရေးခြံရန်ပုံငွေဟောင်း […]
バブルを彷彿とさせる値上がりを見せる 仮想通貨（クリプトアセット）バブルを彷彿とさせる値上がりで再び注目を集めているビットコイン 下記のビットコイン(BTC)チャートを見てみよう ビットコインの価格は、2020၂၀၁၄ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်တွင်ယန်း ၁.၂ သန်းကျော်အသုံးပြုမည်、ထိုအရပ်မှထဆက်လက်、2020年11月24日に一時19100ドルを突破しました最後に19100ドルを突破したのは2018年1月8日で、2၅ လအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း (နေ့စဉ်ပျမ်းမျှစျေးနှုန်း)、Coincheck調べ）となりました しかし、ဒီအချိန်စျေးနှုန်းမြင့်တက်、バブル期とは異なる冷静な状況を示していますこれまでの状況とは具体的に何が違うのでしょうか？ 業界の第一線で活躍してきた者としては、2020ငါထင်သည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏အဘိုးပြတ်ယခုနှစ်ရဲ့အစကတည်းကထင်ကြေးမှပိုင်ဆိုင်မှုသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
Bitcoin ကို "ဒီဂျစ်တယ်ရွှေ" အဖြစ်တည်ထောင်ပြီးပြီလား။ မကြာသေးမီက、Bitcoin ကို "digital gold" ဟုမကြာခဏခေါ်ကြသည်、တိကျသောတိုင်းပြည်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဒေသတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါသောပိုင်ဆိုင်မှုလူတန်းစားဖြစ်ခြင်း、ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ပေးရေးကန့်သတ်အဖြစ်တူညီမှုကြောင့်、အချို့လူများက၎င်းသည်ရွှေနှင့်ဆင်တူသည်ဟုဆိုသော်လည်း၊、အဆိုပါပူဖောင်းကာလအတွင်းစျေးနှုန်းအတက်အကျ၏ပြင်းထန်မှုမှ、ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံခြင်းမရှိပါ、ဒါပေမယ့်မေ့သွားတယ်、မကြာသေးမီကပင်အဓိကမီဒီယာများတွင် "ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွှေ" ဟူသောစကားလုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။、Corona ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ပြန့်ပွားမှုကြောင့်、နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့မဟုတ်ဒေသတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏တန်ဖိုးကိုပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။? 2020နှစ်、Corona ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ပျံ့နှံ့သွားခြင်း、ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုမကြုံစဖူးသောနည်းဖြင့်ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။、ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၀၂၀ မတိုင်မီကျွန်တော်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး、Coronavirus သည်အစစ်အမှန်စီးပွားရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာလှုပ်ရှားမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်、စတော့စျေးကွက်သည်အမြီးအကျိတ်သို့ကျသွားသည်、2020ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင်ကူးစက်ရောဂါကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။、စီးဆင်းမှုကပိုမိုအားကောင်းလာနေသည်、 […]
ဘဏ္Kingdomာရေးနိုင်ငံတော်ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ္financialာရေးအရင်းအမြစ်ရှိသောဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်များသည် Bitcoin ခေတ်အပိုင်း ၃ DeFi သို့ပြောင်းလဲနေကြသည်(ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္financeာရေး) အနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်များ DeFi ဖြစ်နိုင်ခြေ(ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္financeာရေး)ဘာဖြစ်သလဲ အဲ့ဒါဘာလဲ? DeFi(ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္financeာရေး)entr ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောဘဏ္Financeာရေး：DeFi)、Blockchain ကွန်ယက်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသောဘဏ္ecာရေးဂေဟစနစ်သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများရှိသည်、ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ、ထိုကဲ့သို့သောစင်္ကာပူဒေါ်လာအဖြစ်များစွာသောတရားဝင်ငွေကြေးအသုံးပြုခြင်း、Bitcoin、Ethereum、သင်သည် Stella Rumen ကဲ့သို့သော virtual ငွေကြေးများကိုချက်ချင်းကုန်သွယ်နိုင်သည်။ ဖုန်းဖြင့် ၁၅ မိနစ်ခန့်အကောင့်ဖွင့်နိုင်သည်။ သင်သည်အရည်အချင်းပြည့်မီသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ပါက။、မင်းကဆွစ်ဇာလန်ကိုသွားစရာမလိုဘူးလို့ SEBA ရဲ့ CEO Guido Bühlerကပြောပါတယ်။(Guido Buehler)မစ္စတာမစ္စတာဘန်ကီမွန်းကဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။、သုံးစွဲသူ၏လျှို့ဝှက်သော့ခရို Micro PC Raspberry ပိုင်သိုလှောင်မှု(Raspberry Pi)အထက်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောသင်၏ကိုယ်ပိုင် Lightning ကွန်ယက် node ကို run ပါ、မိမိကိုမိမိကိုလွတ်လပ်သည့်လစ်ဘရယ်ဝါဒဟုခေါ်သော Black River Asset Manag […]
ဘဏ္Kingdomာရေးနိုင်ငံတော်ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ္financialာရေးအရင်းအမြစ်များနှင့်အတူဆွစ်ဘဏ်များသည် Bitcoin ခေတ်အပိုင်း ၂ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ DAVOS သို့ပြောင်းလဲနေကြသည်- ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်လုပ်ငန်း、ရှေးခေတ်မှချမ်းသာကြွယ်ဝသူတို့၏ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုကာကွယ်သည့်အတွက်ကျော်ကြားသောဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဒါးဗို့စ်၊- ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်လုပ်ငန်း、ကြာရှည်စွာစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုကာကွယ်သည့်အတွက်လူသိများသည်、အချို့သောဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များက Bitcoin သည်ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ္financialာရေးကဏ္suitableအတွက်သင့်လျော်သည်ဟုထင်မြင်သော်လည်း၎င်းသည်လူနည်းစုဝင်ဖြစ်သည်။、၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာလ၊ ဇူးရစ်၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအခြေစိုက် SEBA Bank AG、အထွေထွေဘဏ်လိုင်စင်များအပြင်、ပြဌာန်းငွေကြေးချုပ်နှောင်ထား、Virtual ငွေကြေးသိုလှောင်မှု、၀ ယ်သည့်အချိန်တွင်နောက်ကျ။ တရားဝင်ငွေကြေးသို့အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲသော virtual ငွေကြေးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဒက်ဘစ်ကဒ်、ဆွစ်ဇာလန်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများမှတဆင့် virtual ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစတင်ခဲ့သည်、Guido Bühler, ဆွစ် SEBA ဘဏ်၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၊ ဒက်ဘစ်ကဒ်နှင့်မိုဘိုင်းအက်ပ်များမှတဆင့် virtual ငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အများကိုစတင်ခဲ့သည်။(Guido Buehler)မစ္စတာ၏အဆိုအရ、ဘဏ်သည် Black River Asset Management ဖြစ်သည်(Black မြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု)Guy Schw သည်လည်းတည်ထောင်သူဖြစ်သည် […]
ဘဏ္Kingdomာရေးနိုင်ငံတော်ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်ရှိသောဆွစ်ဇာလန်ဘဏ်များသည် Bitcoin ခေတ်သို့ပြောင်းလဲနေကြသည်။ အပိုင်း ၁ SEBA ကိုဆွစ် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုဘဏ်အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့သည်။、ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Crypto Asset Bank (၉) နိုင်ငံတွင်ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များအကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်(Cryptocurrency ဘဏ်)SEBA ဘဏ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်、၁၉၉၉ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင်နိုင်ငံအသစ် ၉ ခုတွင် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။、အင်္ဂလန်、ပြင်သစ်、ဂျာမနီ、သြစတြီးယား、ပေါ်တူဂီ、နယ်သာလန်、စင်္ကာပူ、ဟောင်ကောင်、အီတလီမှာ、SEBA ဘဏ်သည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဇူးရစ်အခြေစိုက် SEBA ဘဏ်တွင် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုကိုအဖွဲ့အစည်းနှင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုစတင်ခဲ့သည်、crypto ပိုင်ဆိုင်မှုအွန်လိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုအပြင် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိုလှောင်ခြင်းနှင့်စီမံခြင်း、crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတရားဝင်ငွေကြေးဖြင့်လဲလှယ်ခြင်းစသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို Bitcoin မှကိုင်တွယ်သည်။、Ethereum、Stella、အလင်းရောင်အကြွေစေ့、Ethereum Classic အမှတ်တံဆိပ် ၅ ခုသည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကိုင်တွယ်သည်、Bitcoin、Ethereum、Stella、အလင်းရောင်အကြွေစေ့、ယခုနှစ်သြဂုတ်လတွင်ဆွီဒင်ဘဏ္Financialာရေးဈေးကွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဗျူရို (Ethereum Classic SEBA) သည်အမျိုးအစား ၅ မျိုးဖြစ်သည် […]
ビットコインとは？ブロックチェーンとは？マイニングとは？ ビットコインとは？ビットコインってなに？ ビットコイン（Bitcoin）は、အများဆိုင်ငွေပေးချေမှုမှတ်တမ်းများကိုအသုံးပြုပြီး open source protocol အပေါ်အခြေခံပြီး peer to Peer(F2f)を実現した決済で送金可能な通貨です ビットコイン（Bitcoin）は数ある暗号資産の中で「王様」のような象徴的な通貨 貴金属でいう金のような存在で人々の信用によって価値が決まり保たれます 中央銀行発行通貨､企業群のような中央集権型の発行体が無いのが特徴です ブロックチェーンとは？ブロックチェーンってなに？ ビットコイン開発の過程でブロックチェーンは誕生した ブロックチェーンとは主にビットコインの取引を記録する分散型台帳を実現する為の技術です ブロックチェーンは、ビットコインの中核をなす「トランザクションデータ」の技術のことを指します 取引データ（履歴）を「トランザクション」と呼び、ブロックは複数の取引の集合体ですこれらのブロックが連続して格納されている状態を「ブロックチェーン」と呼びます 暗号資産（仮想通貨）を送る際の取引履歴のデータを「取引」といい、 […]
仮想通貨･暗号通貨 現在価格 | စျေးကွက်တန်ဖိုး / အသံအတိုးအကျယ် / ငွေပေးငွေယူအသံအတိုးအကျယ် Real-time ranking-TOP10
仮想通貨･暗号通貨 現在価格 | အမြင့်ဆုံး / မြင့်တက် / စျေးနှုန်းမြင့်တက်မှု Real-time rank-TOP10
仮想通貨･暗号通貨 現在価格 | အောက်ခြေမြင့်တက် / မြင့်တက် / စျေးနှုန်းတိုးနှုန်းကို Real-time ranking-TOP10
အမျိုးအစား အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ | နိုင်ငံ / နိုင်ငံ(4) အာဂျင်တီးနား(1) အင်္ဂလန်(1) အီတလီ(1) အီဂျစ်(1) သြစတြီးယား(1) နယ်သာလန်(1) စင်္ကာပူ(1) ဆွစ်ဇာလန်(3) ဂျာမနီ(1) ပြင်သစ်(1) ပေါ်တူဂီ(1) ဟောင်ကောင်(1)ဇာတ်ကောင် | စီအီးအို / ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၊ အရင်းရှင်၊ ကျော်ကြားသူ၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု(7) အဲဖရက် F ကိုကယ်လီ(အဲဖရက်ကယ်လီ) (1) အန်သိုနီ Scaramucci(အန်သိုနီ Scaramouch) (1) Brad Garlinghouse(သွေး Garling အိမ်) (1) ခရစ် Larsen(ခရစ် Larsen) (1) ဒံယလေက H Schulman(ဒံယလေက Schulman) (1) ဂျော့ချ်ဆိုးရော့စ်(ဂျော့ချ်ဆိုးရော့စ်) (1) Guido Buehler(Guido Buehler) (1) Guy Schwarzenbach(Geishwarzenbach) (2) Hailey Lennon(Haley Lennon) (1) မှ Ian Simpson(မှ Ian Simpson) (1) ဂျင်းမာ့ခ် Bonnefoux(Jean-Marc Bonuf) (1) Jim Cramer(Jim Kramer) (1) မBlဲဘလိတ်(Matthew Break) (1) Nikolaos Panigirtzoglou(Nikolaos Panigilt Zoguru) (1) ရှင်ပေါလု Tudor ဂျုံးစ်(ရှင်ပေါလု Tudor ဂျုံးစ်) (1) Stanley Printmiller(Stanley Dracken ကြေးမုံ) (1)စီးပွားရေးလုပ်ငန်း | ကော်ပိုရေးရှင်း | ကုမ္ပဏီ(6) Anderson က P.C. သတ်(ဥပဒေရုံး Anderson ကသတ်) (1) Black ကမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု LLC(Black မြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု) (2) Cypherpunk Holdings Inc.(cipher ပန့်ခ် Holdings က) (1) မီးခိုးရောင်စကေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ(မီးခိုးရောင်) (1) JPMorgan Chase & ကုမ္ပဏီ(JP Morgan Chase) (2) မက်ဆာချူးဆက်အပြန်အလှန်ဘဝအာမခံကုမ္ပဏီ(အစုလိုက်အပြုံလိုက်အပြန်အလှန်ဘဝအာမခံ) (1) MicroStrategy ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း(Micro မဟာဗျူဟာ) (1) Ruffer ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ(Raffer ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု) (1) SkyBridge Capital(Skybridge မြို့တော်) (1)ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း | သုတေသန | သုတေသနဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း / နည်းပညာ / အခြေခံများ / ကုန်သွယ်မှု(3) RSI (1) လေ့လာသုံးသပ်သူ(2) Bitcoin(BTC) ဇယား(2)အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဖရင့် | ဖြစ်ရပ်များ / ဖိုရမ်များ / အစီအစဉ်(1) WEF(ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်) (1)encryption ငွေကြေးကို | Cryptographic ပိုင်ဆိုင်မှုများ | နည်းပညာ / နည်းပညာ / အိုင်တီ / ဝက်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု(5) CashApp (1) နေ့(လေလံဇယားကိုညွှန်ကြားခဲ့သည်) (1) F2f(အဆင့်အတန်းတူညီသူအချင်းအချင်းဆက်သွယ်မှု) (1) ပလက်ဖောင်း(1) block ကွင်းဆက်(2) သတ္တုတွင်း(1) သတ္တုတွင်းရေကန်(1) မိုဘိုင်း app(1) လျှပ်စီးကွန်ယက် node ကို(1)encryption ငွေကြေးကို | Cryptocurrency ချိန်း / အရောင်းရုံး / ချိန်း / ပလက်ဖောင်း(3) Beaxy ချိန်း(Beak Sea Exchange) (1) Binance(Binance) (1) CME(ချီကာဂိုကုန်သွယ် Exchange) (1) Cross Tower(လက်ဝါးကပ်တိုင်မျှော်စင်) (1) DeFi(ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္financeာရေး) (1) OSL(OSL) (1) OTC(ဆရာဝန်လက်မှတ်မပါပဲဝယ်ယူနိုင်သော) (1)encryption ငွေကြေးကို | Cryptographic ပိုင်ဆိုင်မှုအမည်(11) BCH(Bitcoin ငွေသား) (1) BTC(Bitcoin) (10) ETC(Ethereum ဂန္ထဝင်) (1) ETH(Ethereum) (3) LTC(အလင်းရောင်အကြွေစေ့) (2) XLM(Stella Rumen) (2) XRP(တိတ်ဆိတ်) (1)ဘဏ္financialာရေး | ငွေပေးချေမှုစနစ် / လွှဲပြောင်း / သိုက် / ငွေထုတ်(3) MasterCard (1) PayPal(1) ဗီဇာ(1) ရင်ပြင်(2) ဒက်ဘစ်ကဒ်(1)ဘဏ္economyာရေးစီးပွားရေး | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ အရင်းအနှီး၊ ဘဏ္Productsာရေးထုတ်ကုန်များ၊(6) ETF(ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယုံကြည်မှု) (1) S&P 500(စံ & ညံ့ဖျင်းသည် 500 စတော့အိတ်ညွှန်းကိန်း) (1) SEC(အမေရိကန် Securities Trading ကော်မရှင်) (1) Wall Street(Wall Street) (2) ကွမ်တမ်ရန်ပုံငွေ(ဆိုးရော့စ်ရန်ပုံငွေ) (1) Cryptocurrency(1) ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွှေ(2) ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ(2) တိုကင်(1) ကြီးစိုးမှု(1) ကုန်သည်(2) Nasduck(1) လက်ကျန်ငွေ(1) စောင်ရန်းကိုရန်ပုံငွေ(3) အစုစု(1) မတည်ငြိမ်မှု(1) အရှိန်အဟုန်ကုန်သည်(1) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ(1) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ(2) လုံခြုံရေး(1)ဘဏ္Economicာရေးစီးပွားရေးသတင်း | ကော်လံ / ခေါင်းစဉ်(3) စျေးနှုန်းကျဆင်းမှု / ကျဆင်းခြင်း / ကျဆုံးခြင်းသတိပေးချက်(1) စျေးနှုန်းများမြင့်တက် / မြင့်တက် / မြင့်တက်၏သတိပြုပါ(2) နယူး Corona ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု(COVID-19) (1)ဘဏ္economicာရေးစီးပွားရေးမီဒီယာ | သတင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ / အသံလွှင့်လုပ်ငန်း / ဖြန့်ဖြူးရေး / မီဒီယာ / မီဒီယာ(1) Bloomberg(1)ဘဏ် | ဘဏ္institutionာရေးအဖွဲ့အစည်း(3) SEBA(SEBA ဘဏ် AG) (3)